प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोईरालाको हातबाट लगाए भाइटीका ! | सुदुरपश्चिम खबर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोईरालाको हातबाट लगाए भाइटीका !
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहिनी कौशल्या कोईरालाको हातबाट भाइटीका लगाएका छन्।आज तिहारको अन्तिम दिन भाइटीकाको अवसरमा उनले बहिनीबाट टीका ग्रहण गरेका हुन्।
कौशल्याले फूलमाला तथा टीका लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि बहिनीलाई टीका र माला लगाइदिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट प्राप्त तस्वीरमा देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको साथमा उनकी पत्नी राधिका शाक्य पनि सहभागी थिइन्।
यो पनिः दही स्वास्थ्यका लागि राम्रो खुराक मानिन्छ । यो दुधभन्दा पनिब बढी फाइदाजनक हुन्छ । यसमा प्रोटिन, क्यालसियम, भिटामिन–बी जस्ता पोषक तत्वहरु हुन्छन् । यसलाई खानाले शरीरलाई लाभदायक गर्छ । हरेक दिन यसको सेवन गर्नाले अपच, कब्जियत, ग्यास जस्ता समस्याहरु हल हुने गर्छ । भान्छामा कहिलकाँही धेरै मसालेदार खाना पाक्छन् । केही मसालामा दही मिलाएर खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न फाइदा हुने गर्छ । कालो मरिच हरेक घरमा प्रयोग गरिन्छ ।
एक कटौरा दहीमा १ चम्चा कालो मरिच मिलाएर खाने गरेमा शरिरमा रहेको बोसो कम हुन थाल्छ । केही मानिसहरु तौल कम भएका कारण टेन्सन लिन्छन् । यसका लागि दैनिक ड्राइफुडमा दही हालेर खानाले शरिरमा वजन बढ्छ । खाना पचाउन गाह्रो भएको छ भने पिनेको जिरामा दही हालेर खानुहोस् पाचन प्रक्रियामा सुधार हुन्छ । मुखमा छाला गएर समस्यामा पर्नु भएको छ भने दहीमा मह हालेर खाने गर्नुहोस् । दुई तिन दिनमा नै निको हुन्छ मुखमा जाने समस्या ।
(Gnewsnepal.com बाट साभार )